4904 Shayamoya	Kokstad, 4700
Ancede xa ebuya angayi kwaGogela apho sasihlala khona sihlala apha eKokstad eShayamoya ngoku.Xa efika apha eKokstad akhwele itaxi eziya eShayamoya athe nodriver ehlike ecreche. Xa efika ecreche athathe indlela isandla sasekhohlo angene kwesosistrato aqonde phambili. Xa efika apho siphela khona uzobona indlela encinci yehla ngoleft kwiline yesibini kulapho ke ekhaya. Abuze nakubani na ambonayo athi ucela kwa 4904 kulo Esethu kwaMamiya ongu Chaz’inyani. Ndiyacinga ke angeke alahleke. Buya sana lwam ndisaphila.